Vaovao - Fa maninona no lafo be i Bitcoin? Inona no atao hoe fifanakalozana Bitcoin?
Tamin'ny 700 taona talohan'ny namoahan'i Suède ny vola taratasy eropeana voalohany tamin'ny 1661, dia nanomboka nandinika ny fomba hampihenana ny enta-mavesatry ny olona mitondra vola madinika varahina i Shina. Ireo vola madinika ireo dia manahirana ny fiainana: mavesatra izy io ary mampidi-doza amin'ny dia. Taty aoriana dia nanapa-kevitra ny mpivarotra ny hametraka ireo vola ireo miaraka ary hamoaka taratasy fanamarinana mifototra amin'ny sandan'ny vola madinika.
Ny famoahana tsy miankina dia niteraka fitomboan'ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fihenan'ny sandam-bola: nanaraka izany ny governemanta ary namoaka ny vola taratasy notohanan'ny tahiry volamena, ary nahatonga azy io ho tolo-dalàna voalohany manerantany.
Tao anatin'izay taonjato vitsivitsy lasa izay, ny firenena dia nanomboka naka ny "fenitra volamena", tamin'ny fampiasana kojakoja toa ny volamena sy ny volafotsy amin'ny vola madinika mint izay milanja lanja iray. Ary maneho sanda iray mandra-pahatongan'ny fanodikodinam-bola, izay mitarika amin'ny fiakaran'ny vola solontena.
Ny banky dia mamoaka "fatorana volamena", izany hoe, ny vola taratasy miaraka amin'ny sanda mitentina US $ 50 dia azo atakalo $ 50 amin'ny volamena.
Tamin'ny 1944, ny rafitra Bretton Woods dia nanapa-kevitra fa ny firenena 44 manatrika ny fivoriana dia hitazona ny vola hoentina amin'ny dolara amerikana satria ny dolara amerikana dia tohanan'ny tahiry volamena. Midika izany fa ny dolara amerikana dia azo avadika ho volamena amin'ny fotoana rehetra.
Midika izany fa ny dolara amerikana dia azo avadika ho volamena amin'ny fotoana rehetra.
Tsara ny vokany, saingy tsy maharitra ny faharetany. Ny fitomboan'ny trosam-bahoaka, ny fiakaran'ny vidim-piainana ary ny fitomboan'ny ratsy amin'ny fandanjana ny fandoavam-bola dia midika fa iharan'ny tsindry bebe kokoa ny dolara amerikana. Ho valin'izay, ny firenena eropeana sasany dia nisintaka tamin'ny rafitra mihitsy ary nanakalo ny dolara amerikana tamin'ny volamena. Tamin'izany fotoana izany, ny tahiriny dia misy dolara bebe kokoa noho ny volamena.
Tamin'ny 1971, ny filoha amerikana teo aloha Richard Nixon nanidy ny varavarankely volamena ary nanova an'ity toe-javatra ity. Ny governemanta vahiny mitazona dolara be loatra, ary i Etazonia dia mora iharan'ny tsy fahampiana volamena. Niaraka tamina mpanolotsaina 15 hafa, nanambara drafitra toekarena vaovao hisorohana ny fidangan'ny vidim-piainana, hampihena ny tsy fananan'asa, ary hamadika ny dolara amerikana ho lasa ara-dalàna, izay miankina amin'ny faneken'ny mpampiasa vola fa tsy ny entam-barotra sy ny fenitra.
Noho izany, ny fanantenana dia ny hanaiky ny volanao ny ankolafy rehetra, izay mifototra tanteraka amin'ny finoana.
Toy izany koa ho an'ny Bitcoin, ity cryptocurrency ity dia nahatratra $ 787.06 avo indrindra. Inona no manome lanja Bitcoin? Ny fanambarana fa tratra izany amin'ny alàlan'ny famatsiana sy ny fangatahana dia toa tsy manarona ny toe-javatra rehetra. Tsy misy fotony ary tsy fehezin'iza.
Farafaharatsiny mba hahafahanao miantehitra amin'ny maso ivoho fitantanana ara-dalàna hitazomana ny sandan'ny vola iray.
Bitcoin dia manana ny mampiavaka ny vola ara-dalàna. Na izany aza, raha jerena ny fomba fitantanana dia tsy misy "manana" Bitcoin. Toa mandeha amin'ny fomba mitovy amin'ny fiat cash izy, fa ny tontolo iankinan'ny tontolo iainana kosa dia mieritreritra ny mpahay toekarena sy ny manam-pahaizana momba ny vola hoe: iza no mamaritra ny vidiny?
Ny zavatra hitanao dia 5 amin'ireo tsipika kaody an-tapitrisany ao Bitcoin. Bitcoin dia tsipika kaody an'arivony vitsivitsy monja tamin'ny voalohany, novolavolain'i Satoshi Nakamoto tamin'ny 2008 ary navoaka tamin'ny fiandohan'ny taona 2009. Ao amin'ny taratasy fotsy malaza "Bitcoin: Rafitra vola elektronika ho an'ny peer-to-peer" (bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System), nohazavaina ny momba ny Bitcoin.
Ny heviny tany am-boalohany dia ny hamorona endrika vola izay tsy mila mandalo amin'ireo andrim-panjakana ara-bola satria voahidy.
Ny fanavaozana lehibe indrindra dia ny fampiharana ny teknolojia blockchain. Ny sakana tsirairay dia maneho fifanakalozana ao amin'ny tamba-jotra Bitcoin - arakaraka ny isan'ny sakana, ny faharetan'ny fifampiraharahana. Noho izany dia namorona "rojo" izy, noho izany ny anarany.
Raha te hiteraka sakana iray, ny mpitrandraka dia mila mampiasa ny fahefana fanodinana solosaina tany am-boalohany sy herinaratra betsaka hanamarinana ny fisian'ny fifanakalozana lanja X sy ny fotoana eo anelanelan'ny A sy B. Rehefa voamarina dia miseho ny sakana ary mandalo ny fifampiraharahana . Ireo mpitrandraka dia nahazo Bitcoin ho valisoa.
Na izany aza, ity vola dizitaly ity dia tsy misy lanjany anatiny-tsy azo ampiasaina ho entam-barotra. Ny olona izay misalasala amin'ny Bitcoin dia milaza matetika fa raha te ho tafavoaka velona i Bitcoin dia tsy maintsy ekena aloha izy io ary ampiasaina amin'ny entam-barotra hafa. Miadana, rehefa mandeha ny fotoana, dia ho lasa vola. Ohatra, satria volamena no ampiasaina amin'ny firavaka sy vokatra elektronika, dia manangona volamena ny olona mba hitehirizana ny sandany.
Tao amin'ny sanganasa lavitra nataon'ny ekonomista aostraliana Carl Menger, dia nanomboka namaritra ny vola izy ho "ny zava-misy fa ny entam-barotra sasany dia lasa fomba fifanakalozana eken'ny ankapobeny." Miorina amin'ny Menger, Ludwig von Mises, mpahay toekarena ihany koa, dia manasokajy ny vidin'ny entam-barotra ho toy ny “varotra ara-barotra” ihany koa. Ny fanomezana vola ara-dalàna dia vola misy "entana manana mari-pahaizana manokana ara-dalàna".
“… Vola kely mifanohitra amin'ny vola, ao anatin'izany ireo zavatra manana mari-pahaizana manokana momba ny lalàna…” -Ludwig von Mises Teoria momba ny vola sy ny trosa
Ny hevitra momba ny soatoavina intrinsika dia efa lalim-paka ao amin'ny olombelona, ​​ary na i Aristotle aza dia nanoratra momba ny antony ilan'ny vola lanja anatiny. Raha ny tena izy, na inona na inona vola, ny lanjan'izany dia tsy maintsy avy amin'ny mahasoa azy manokana. Satria ny tantara dia manaporofo fa tsy misy na inona na inona mila ny sandan'ny entam-barotra mba ho lasa vola, dia tsy azo ihodivirana ny adihevitra Aristotle.
Any amin'ny faritra afrikanina sy amerika avaratra, ny vakana fitaratra dia ampiasaina ho vola, na dia voaporofo fa tsy dia misy ilana azy loatra aza. Ny vahoaka Yap any Pasifika dia mampiasa vatosokay ho vola.
Ny olona izay misalasala amin'ny Bitcoin dia matetika mampiasa adihevitra momba ny soatoavina intrinsika hanamelohana ny fahaizan'i Bitcoin. Mampalahelo fa fisiana dizitaly fotsiny i Bitcoin, noho izany tsy afaka amin'ny fangejan'ny tontolo tena izy. Tsy mila manana lanja anatiny toy ny volamena izy io, ary tsy mila omen'ny hafa zony manokana hanaovana azy io ho ara-dalàna. Na dia mety ho toa fanazavana aza ity-Bitcoin dia orinasa vaovao izay tsy iharan'ny fitsipiky ny olombelona-fa mbola tsy misy dikany feno.
Eritrereto izao: ny vola Bitcoin sy fiat dia tontolo iankinan'ny tontolo iainana.
Fiat currency dia an'ny tontolo ara-nofo, izay mitondra fameperana vola hafa. An'izay mifehy ny vola ny fahefana, ary ny banky foibe dia afaka manonta vola bebe kokoa foana hampiroboroboana ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fivezivezena. Na izany aza, tsy misy olona afaka milaza aminao marina hoe firy ny dolara azo tsapain-tanana mivezivezy eto an-tany.
Voafetra ny famatsiana volamena, saingy hisy fiatraikany amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Raha misy mahita volamena be dia be ivelan'ny famatsiana ankehitriny, dia mety ho simba tanteraka ny fananana. Ny fanavaozana ny siansa ara-pitaovana dia mety hampihena ny filàna fampiasana volamena amin'ny vokatra elektronika sy ny mpanjifa.
Ny toetra dizitalin'ny Bitcoin dia mitaky fototra teôria vaovao. Ny mpahay toekarena dia niaiky hatry ny ela ny fetran'ny metaly sarobidy sy ny vola fiat. Noho izany, ny fampidirana an'i Bitcoin dia niteraka fitsipiky ny lalàna vaovao, izay antsoin'ny olona maro hoe "ny ekosistema ara-bola voalohany".
Ny olana dia, araka ny nolazain'ny Maximizers Bitcoin anao, ny vola ara-dalàna sy ny tontolo iainana cryptocurrency dia tsy afaka miara-miaina. Satria tsy misy sanda anatiny satria fitaovana ara-bola, vokatra fampiasam-bola na fiarovana, ny filokana lehibe indrindra dia ny fanaovana Bitcoin ho vola manerantany.
Androany, ny famatsiam-bola manerantany (M1) dia 7,6 tapitrisa dolara amerikana. Raha mampiditra petra-bola fanamarinana ianao, fatorana vetivety, tahiry ara-potoana ary fitaovana ara-bola hafa dia hahatratra 90 tapitrisa tapitrisa tapitrisa dolara izany. Mba hahatongavana amin'ny vola manerantany, Bitcoin dia mila manana farafaharatsiny ny sandan'ny famatsiam-bola manerantany - saingy tsy izany no izy, satria ny sandan'ny Bitcoin dia $ 130 miliara fotsiny amin'ny fotoana nanoratana.
Na izany aza, ny trosa mihombo mihombo sy ny trosan'ny vahiny dia mety hanosika ny mpampiasa vola hanomboka hitady fitaovana fanakorontanana aotom-piainana izay mora azo kokoa ary azo soloina kokoa noho ny volamena. Mety hampiroborobo ny fanombatombanana Bitcoin io satria manana fiasa fivarotana lanja. Mba hiadiana amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana, maro ny olona no afa-po mitazona dolara, euro na yen ao amin'ny portfolio-zareo Arzantina ary Venezoeliana no manao an'io, mitazona dolara marim-pototra izy ireo.
Mety hitondra sanda azo ampiharina ho azy io: ny Bitcoin dia azo ampiasaina ho tahiry mitahiry.
Hitantsika ho fananana io. Raha izany dia Bitcoin dia vola manohitra ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny. Mba hampirisihana ny fitomboan'ny tamba-jotra, isaky ny mamorona sakana vaovao ao amin'ny sakana, bitcoin 50 no hamorona. Aorian'ny isaky ny kianja 210.000, dia ho antsasaky ny valiny (12.5 isan-tora-droa izao no valisoa, ary hihena ho 6.25 amin'ny 14 Mey 2020). Miaraka amin'ny tsy fahampian'ny natiora sy ny satroky Bitcoin Bitcoins 21 tapitrisa, tsy mahagaga raha afaka mandray ny Bitcoin ho vola sarotra (na koa vola azo antoka) ny olona sy ny andrim-panjakana.
Midika izany fa ny politikam-bola anatiny dia mitarika ny fahefa-mividin'i Bitcoin - fa inona no mamaritra ny vidiny?
Raha mijery ny sekoly ara-toekarena mahazatra ianao dia ho hitanao fa ny vidin'ny Bitcoin dia voafaritra amin'ny vidiny famokarana. Midika izany fa fitaovana sy herinaratra. Raha mbola mijaly noho ny fihenan'ny ala i Bitcoin, dia hihena tsikelikely ny isan'ny mpitrandraka noho ny vidin'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany. Na eo aza izany, mbola misy mpitrandraka vonona ny hivarotra bitcoin amin'ny fatiantoka, izay mety hanondro fa misy olona manidy ny fiakaran'ny bitcoin amin'ny ho avy: ny vidiny dia tsy miankina tanteraka amin'ny vidin'ny famokarana, na dia antony iray aza izany.
Ny sekolim-pianarana ara-toekarena neoclassical dia nivelatra tamin'io teôria io ary nanampy antony iray hafa: famatsiana sy fangatahana. Koa satria voafono ny famatsiana bitcoin dia hihena ihany koa ny isan'ireo bitcoin trandrahana rehefa mandeha ny fotoana, ka mety hiakatra ny fangatahana bitcoin bebe kokoa. Ny fangatahana bebe kokoa dia mitovy amin'ny vidiny avo kokoa.
Ny miantehitra amin'ny zava-kendrena kendrena fotsiny dia toa tsy afaka mandoko ny sary iray manontolo. Raha ny vidin'ny famokarana no antony lehibe indrindra, dia tokony hanakaiky ny famatsiam-bola malalaka amerikana (M3) ny sandan'ny Bitcoin.
Na eo aza izany dia mbola very vola ny mpitrandraka, na eo aza ny vidin'ny Bitcoin fitrandrahana.
Raha zava-dehibe ny fifandanjan'ny fangatahana sy ny famatsiana, dia tokony hamaritra ny fangatahana marim-pototra ny valindrihana mazava sy voamarina ao amin'ny Bitcoin. Na izany aza, Bitcoin dia mbola mora miovaova tanteraka ary mety hirodana sy hitombo amin'ny andro iray ihany.
Miditra amin'ny sekolim-pianarana toekarena aostraliana, ny mpanohana Bitcoin dia tena tia an'ity sekoly ity. Ireo mpahay toekarena aostralianina dia mino fa ny vidin'ny zavatra rehetra dia faritana amin'ny lafin'ny lohahevitra, eny fa na dia ny vidin'ny famokarana aza. Ny famatsiana sy ny fangatahana dia mamaritra ny safidin'ny tena manokana. Noho izany, azony atao ny manazava ny lanjan'i Bitcoin-ny lanja azo tsapain-tanana sy ny anton-javatra mety ho singa lehibe kokoa.
Hita izany fa tsy misy fanazavana mazava momba ny antony maha-sarobidy ny vola crypto (na ny vola aza). Amin'ity tranga ity, ny vidin'ny Bitcoin dia toa entin'ny maodely ara-toekarena mahazatra, ny fahatsapana ny tsena ary ny politikam-bola anatiny.
Na izany aza, na inona na inona teoria ara-toekarena raisin'ny olona, ​​ny cryptocurrency dia mbola hampiditra revolisiona ara-bola. Raha afaka mivoatra amin'ny endrika vola iraisam-pirenena hafa izy, dia hongotana ny tontolo iainana ara-bola (na tsara izany na ratsy, tsy fantatsika).
Farany, Bitcoin no fanombohana fanandramana ara-bola. Nanomboka tamin'ny 2016 ka hatramin'ny 2017, ny teknolojia blockchain dia nitarika ny fanambinana cryptocurrency ary nitondra tontolo vaovao fanavaozana blockchain. Androany, hampiasa ny foto-kevitry ny pegs fananana sy ny banky fitehirizana izahay handinihana ireo crypto azo antoka izay afaka mitazona ny vidin'ny iray dolara.
Raha tokony hitondra ny Bitcoin toy ny vola dia tsara kokoa ny mandray azy io ho toy ny rafitra fandoavam-bola.
Noho izany, ny tena sandan'ny Bitcoin dia mitoetra ao amin'ny tamba-jotra. Arakaraka ny isan'ny olona mandray anjara no tsara kokoa. Raha ny tena izy, midika izany fa miankina amin'ny tompony ny sandan'ny Bitcoin. Amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny lazan'ny Bitcoin (tsy amin'ny fampiasana isan'andro, fa amin'ny fampiasam-bola sy ny varotra), dia mihamaro ny olona liana liana manomboka mihaino an'ity teknolojia vaovao ity. Midika izany fa fanaparitahana bebe kokoa.
Na izany aza, mba hahafahan'ny Bitcoin miasa marina araka ny efa nampoizina dia mila manala ireo mpitrandraka sy dobo fitrandrahana izy amin'ny alàlan'ny famindrana mankany amin'ny rafitra porofom-bola (PoS). Ny rafitra porofon'ny asa-Bitcoin dia mahatonga ny mpitrandraka lafo dia lafo handany vola an-tapitrisany maro hanamarinana ny fifanakalozana Bitcoin amin'ny tamba-jotra amin'ny alàlan'ny herinaratra sy ny fikirakirana solosaina. Miaraka amin'ny rafitra PoS, homena lanja Bitcoin noho ny tamba-jotra. Ny ankamaroan'ny mpandray anjara dia hanome ny ampahany amin'ny fananany mba hamelana ny tambajotra hitombo, amin'izay dia hampitombo ny fananany.
Tsotra ny feony, fa ny ankamaroan'ny bitcoin ankehitriny kosa dia an'ny mpitrandraka sinoa. Raha afaka manolo (ohatra) ny famatsiam-bola malalaka any Etazonia izy dia maninona ny governemanta amerikana no mandray vola manerantany fehezin'ny mpitrandraka fahefana matanjaka?
Raha tsy maniry ny fahefana lehibe, maninona no manaraka ny kongresy kely? Ny tanjona ara-bola manerantany dia mety ho nofinofy fotsiny, fa amin'ny farany, raha afaka miasa Bitcoin dia miankina amin'ny hoe iza no henonao, toy ny hoe aiza no ahazoana ny sandany.
btc fitoeran-javatra, fitoeran-javatra bitmain, crypto mining asic, fitaovana fitrandrahana crypto, kaontenera antminer, kaontenera antbox,